Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo aaminsan in ay yartahay miisaaniyadda Garsoorka – Kalfadhi
Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo aaminsan in ay yartahay miisaaniyadda Garsoorka
Shir sanadeedka Garsoorka dalka ayaa shalay ka furmaya magaalada Muqdisho, kaasoo ah sanadkii labaad oo la qabto shirkan, iyadoo ay ka qeyb-gallen Hey’addaha Garsoorka dowladda Federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada.
Ku-simaha madaxweynaha JFS ahna guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal Sheikh Adiraxmaan ayaa furay shir sanadeedka arrimaha garsoorka ee dalka oo muddo 30 sano kadib la qabanyo markii-2d.
Guddoomiye Mursal, ayaa sheegay in uu aaminsanyahay in miisaaniyadda Garsoorka ay yartahay, xukuumadda iyo Baarlamaanka ayuu sheegay in ay tahay in arrintaasi ay muhiimadeeda ay siiyaan, sababtuna waxaa uu ku sheegtay in hay’adda Garsoorka ay tahay hay’adda ugu weyn ee dowladnimadda dalka.
Waxaa uu hadalkiisi sii raaciyay, “Hay’adda Garsoorka waa hay’addii gacanta siin laheyn meesha aan u socono.
Ku-simaha madaxweynaha JFS ahna guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal Sheikh Adiraxmaan, ayaa dhinaca kale sheegay in arrinta ugu muhiimsan ay tahay in Dastuurka heekalkiisa la dhammeystiro. Xeerarkii lasoo saaray 60-kii iyo 70-kii waa in la waafajiyaa nidaamka federaalka ee aan hadda ku dhaqanno ayuu hadalkiisa sii raaciyay.
Arrimaha shirkan looga hadlayo ayaa waxaa kaloo ka mid ah caqabadaha heysta garsoorka dalka iyo sidii loo tayeyn lahaa Garsoorka dalka, iyadoo la filayo in Wasaaradda Cadaaladda ee dowladda Federaalka ay soo bandhigi doonto warbixin ku saabsan xaalada garsoorka dalka.
Madaxweyne Farmaajo “Waa tallaabadii ugu muhiimsanayd ee aan ku saxayno hannaanka dib u dhiska ciidanka Soomaaliyeed.”
Guddoomiye Mursal “Soomaaliya halka ay ka dhismi la’dahay waa Garsoorka”n